संस्कृति | Nepali Virals
जन 23, 2018 | संस्कृति, हट टपिक्स
शिवरात्रि आउन लागेको छ । यतिखेर अनेकथरि बाबाहरू यहाँ देखा पर्छन, कालो लुगा लगाउने, नरमुण्डको माला लगाउने, राताराता आँखा भएका, विचित्रका मन्त्र भट्याउने डरलाग्दा अघोरीहरू पनि आउने गरेका छन् । तपाई‌ंहरूले शिवरात्रिमा नागा बाबाहरूका अनेकन चर्किकला देख्नु भएकै होला । शिव रात्रिमा पशुपतिनाथ आउने नागा बाबाहरूले लिंगमा लठ्ठी बेरेर त्यसले ढुंगा उचाल्नेमात्र होइन कि कहिलेकाँही त मान्छे नै उभ्याएर अनेक चर्तिकला देखाउँछन् । वास्तवमा को हुन् त ती अघोरी नागा बाबा? कहाँबाट आउँछन्? के छ तिनका रहस्य? आज हामीले भिडियोसहित यो विशेष सामग्री तयार पारेका छाैं ।
अाम मानिसहरू भूतप्रेत र आत्माहरू पनि जतिको अघोरी जोगीहरूसँग डराउने गर्छन । नागाहरू सबै अघोरी साधु हुँदैनन् । अघोरी साधुहरूका संसारै अलग्गै हुन्छ । उनीहरू हिन्दु धर्मअन्तर्गत नै एक सम्प्रदायका अंग हुन्, तर तिनीहरूका ’boutमा थोरै मानिसलाई‌ मात्र थाह छ । यतिमात्र कुरा सुनिन्छ कि जब हामी सुत्छाैं अनि ती अघोरी बाबाहरूको वास्तविक असली कार्य प्रणाली शुरु हुन्छ । मध्यरातमा पुगेर ती अघोरी बाबाहरूले के गर्छन भन्ने कुरा उनीहरूका बीचमा मात्र थाह हुन्छ ।
अघोरी बाबाहरू सदैव तिनीहरूका अनाैठो व्यवहार, एकान्तप्रियता र तिनीहरूले गर्ने रहस्यमय गतिविधिहरूका कारणले चिनिन्छ । हेर्दा जति विचित्र उनीहरू हुन्छन्, त्यति नै अनाैठा तिनका साधनाहरू पनि हुने गर्छ ।
भनिन्छ, अघोरीहरूका साधना मासु, मदिरा र मैथुनबिना पूर्ण हुँदैन । तर यसका पछाडि के कारण छ, त्यो भन्न सकिँदैनन् । कतिसम्म भनिन्छ भने राक्षसहरूपछि अघोरी सम्प्रदायका बाबाहरू नै यस्ता मानिस हुन्, जसले मानिसकै मासु खाने गर्छन् ।
अघोरीहरू शैव सम्प्रदायका मानिन्छन् । यिनीहरूका आफ्नै पन्थ हुन्छ, जसलाई‌ अघोर पन्थ भनिन्छ । अघोर पन्थको उत्पत्तिका विषयमा निश्चित प्रमाणहरू भेटिएका छैनन्, अघोर पन्थ कपालिक सम्प्रदायसँग मिल्दोजुल्दो मानिन्छ । भगवान शिव स्वयं एक अघोरी मानिएका हुनाले यिनीहरूलाई‌ साक्षात शिव मान्ने पनि चलन छ ।
तीन खालका साधना
अघोरीहरूले तीन प्रकारका साधना गर्छन, शिव साधना, शव साधना र श्मशान साधना। शिव साधनामा शवमाथि उभिएर साधना गरिन्छ । अन्य प्रकारका साधनामा पनि शवमाथि उभिएर वा त्यसमाथि खुट्टा चढाएर विशेष प्रकारका योगाशन गर्ने गरिन्छ । यस प्रकारका सबै साधनाहरूमा मानव मासु र मदिरा प्रसादका रुपमा चढाइन्छ ।
नेपालमा शिवरात्रिका बेला नागा बाबा र केही अघोरी बाबाहरू पनि आउने गरे पनि तिनीहरू भारतबाटै आउने गर्छन् । भारतमा पनि अघोरीहरू सबै ठाउँमा पाइँदैनन् । भारतको असमस्थित कामख्या मन्दिर सबैभन्दा धेरै अघोरी पाइने स्थान हो । कामाख्या मन्दिर सतिदेवीले आफैलाई‌ अग्निदाह गरेपछि शिवजीले उनका मृतशरीर बोकी हिड्ने क्रममा सतिदेवीको योनी पतन भएका स्थान मानिन्छ ।
असामबाहेक अघोरीहरू पश्चिम बंगाल, उज्जैन, नासिक, वाराणसीलगायतका स्थानमा पाइन्छ ।
मध्यरातमा मानिस जलाउने घाटमा तपस्या
अघोरीहरू मध्य रातमा मानिस जलाउने घाटमा पुगेर अनेकन तन्त्र सिद्धि गर्छन् । मानिस जलाएको खरानी आफ्नो शरीरमा दल्छन् । भनिन्छ, मानिस जलाउँदा बचेको अस्तु यिनीहरूले खाने गर्छन् ।
कालो वस्त्र लगाउने अघोरीहरूले नरमुण्डका माला लगाउने गर्छन्, उनीहरूले आफ्नो कुटी पनि श्मशनमा नै बनाउने गर्छन् । मानिस जलाउने घाटमा मात्र होइन्, अघोरीहरूले हिमालयमा पनि तपस्या गर्छन भन्ने गरिन्छ । यसैका लागि उनीहरू बेलाबेलामा नेपाल आएर कैलाशसम्म जाने गर्छन ।
हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले अहिले पनि कतिपय स्थानमा पाँच वर्षभन्दा मुनिका, सर्पले टोकेर मृत्यु भएका र आत्महत्या गरेका मानिसहरूलाई‌ नजलाइकन गाड्ने वा बग्दो नदीमा बगाउने गर्छन । नदीमा बगाइएका यस्ता शबहरू डुबिसकेपछि हलुका भएर पानीमा तैरिन्छ । भनिन्छ, अघोरीहरूले यस्तै शब पानीबाट निकाले आफ्नो तन्त्र सिद्धि गर्ने गर्छन्।
जे पनि खान सक्छन
अघोर पन्थमा प्रवेश गर्नुअघि सबै किसिमका मायामोह त्याग्नु पर्ने नियम छ । अघोरीहरू खान पिउनमा केही पनि बार्दैनन् । दालभात पाए दालभात, रोटी पाए रोटी, खसी कुखुरा पाए त्यसकै मासु वा मानव मासु पनि खान पछि पर्दैनन । कतिसम्म भने अघोरीहरूले कुहिन लागेको पशुका मासुसमेत खाने गर्छन् ।
मार्च 21, 2016 | बिर्सेका, संस्कृति, समाज, हट टपिक्स, हाँसोउठ्दो
१३ फोटोमा हेर्नुस भगवानका पालाको यौन जीवन
मार्च 18, 2016 | बिर्सेका, संस्कृति, समाज
यौनका सन्दर्भमा पश्चिमेली समाजलाई खुल्ला र पूर्वीय समाजलाई संकुचित मानिन्छ । त्यसो त पछिल्लो समय पूर्वीय समाज पनि आधुनिकताका नाममा पश्चिमेली सस्कृती अबलम्बन गर्न थालेका छन् । तर यौनका मामिलामा पूर्वीय समाज पनि कम्ति खुल्ला भने छैन । यसको बिस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नभएको मात्र हो ।
नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि सयौ बर्ष पुरानो मठ मन्दिरहरुमा थरिथरिका यौनाकृतिहरु कुदिएका छन् । अधिकांश चर्चित मन्दिरहौर्मा खुल्लमखुल्ला देखिने ठाउँमा बिभिन्न तरिकाका यौनासनहरु बनाइएका छन् । के तपाईले यी कुराहरु ख्याल गर्नु भएको छ ? यसलाई कतिपयले लुकी लुकी चिहाइरहेको हुन्छ भने कतिपय नदेखे झैँ गरेर हिड्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक ठाउँमा त्यस माथि पबित्र मानिने मन्दिरमै किन यस्तो बिचीत्र यौनासन बनाईयो भन्ने सन्दर्भमा बिभिन्न धारणाहरु छन् । तर यसको सार के हो भने त्यस बेला पनि यौन सम्पर्कका बेग्लै दुनिया थिए । यसलाई मनोरन्जन र मस्तीको साधन मानिन्थ्यो । अहिले जतिसुकै खुल्लापनको कुरा गरे पनि यी टुडालहरु नियाल्दा त्यसबेलाको शैली पनि ‘कडा’ नै लाग्छ । यति मात्रै होइन कतै अहिलेका आधुनिक भनिएका जमातले यी पुराना टुडालहरुबाटै सिकेका त होइनन् ? अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।
मन्दिरमा यौनासन किन बनाइए भन्ने ’boutमा बिभिन्न धारणा/मान्यता छन् । के पनि विश्वास छ भने मन्दिरमा पस्दा मानिसले नराम्रा विचार, भावना बाहिरै फालेर विशुद्ध धार्मिक भावना र कार्यका लागि मात्रै पस्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन मन्दिरको बाहिर नै कामुक कला कुदिएका थिए । केहि किम्बदन्ती के छ भने मन्दिरमा यौनजन्य संकेत सहितका कला राख्दा चट्याङ पर्दैन । जसको कारण कहिलै पनि मन्दिरहरुमा कुनै क्षति हुँदैन ।
अर्को मान्य के पनि छ भने प्राचिन कालमा हिन्दुधर्मावलम्बीहरुलाई मुश्लिम शाशकहरुको डर थियो । मुस्लिमहरुले आक्रमण गर्नेक्रममा नग्न र कामुक बस्तुहरुको नजिक पर्दैनन् भन्ने त्यतिखेरको चेतना थियो त्यसैकारण उनीहरुबाट मन्दिरलाई जोगाउनकै लागि पनि यस्ता आकृति कुदिएका थिए भनिन्छ । कतिपयले यस बिषयलाई त्यतिखेरको राजाहरुको सम्पन्नता र मज्जाको जीवनशैलीका रुपमा पनि चित्रण गरेका छन् । यी १३ फोटोमा हेर्नुस भगवानहरुको यौन जीवन ।
पाटनस्थित जगननारायण मन्दिर आसपास बनाइएका टुडालहरु